मोना कुवेत द्वारा १४ दिन कोमामा बसेका गणेश लाई आर्थिक सहयोग - Myagdi Online
मोना कुवेत द्वारा १४ दिन कोमामा बसेका गणेश लाई आर्थिक सहयोग
10 महिना, 16 दिन अगाडि
कुवेतको कुक्जे कम्पनीमा कार्यरत रघुगंगा गाउँपालिका–३ मतारेका गणेश बहादुर किसान (थापा) लाई म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना) राष्ट्रिय कार्यसमिति कुवेतले आर्थिक सहयोग गरेको छ । कुवेतको आदान अस्पतालमा झन्डै ५० दिनको उपचार पछि हिजो स्वदेश फर्किएका गणेश लाई म्याग्दी मोनाले नेपाली रु. ४० हजार आर्थिक सहयोग गरेको हो । रक्तचापको समस्याले आफ्नै कोठामा अचेत भएर ढलेपछि उनलाई उपचारको लागि आदान अस्पतालमा भर्ना गरीएको थियो । दुई हप्ता सम्म कोमामा राखेर उपचार गरिएको थियो । उनको उपचारमा लागेको सबै खर्च कम्पनीले व्यहोरेको छ ।
कम्पनीको सहयोगमा कुबेतको आदान अस्पतालमा उपचार गराएका गणेशको रेखदेखको लागि कम्पनीले राखुकै रिजन परियारलाई खटाएको थियो । बिगत २ वर्ष देखि कुक्जे कम्पनीमा कार्यरत रहेका गणेश बिरामी हुँदा घरपरिवारको गुजारा चलाउने सपना पनि भताभुंग भएको छ । उनको दायाँ खुट्टा र हात नचल्नुको साथै अहिले सामान्य बोल्न सक्ने भएपनि अझै पूर्ण रुपमा स्मरण गर्ने शक्ति फर्किसकेको छैन् ।
कुवेतको कानुन अनुसार उनले पाउनु पर्ने सबै हिसाब उपलब्ध गराइएको सोही कम्पनीमा प्रशासन शाखामा कार्यरत राखु साझापानीका तिलक भण्डारी (कमल) ले जानकारी गराउनु भएको छ । उहाँकै संयोजकमा कम्पनीमा रकम संकलन गरि नेपाली रु. चार लाख साठी हजार गणेशको श्रीमती यु माया थापाको बैंक खातामा जम्मा गराएको र अरु थप रकम पनि संकलन भइरहेको भण्डारीले जानकारी गराउनु भएको छ ।
दरमिजा हुँदै चिमखोला जाने गोखोको भिरमा गोरेटो बाटो मर्मत (फाेटाे फिचर)3दिन अगाडि
मोना सेन्दाई जापानले तीजको अवसरमा विविक्यु गर्ने3दिन अगाडि
फलोअप : एसोशियसन अफ एग्रिकल्चरका कर्मचारी भन्छन– हामीलाई पनि ठगे4दिन अगाडि
म्याग्दीका अभिषेक कटुवाल मलेसियामा हुने ओपन टेकवान्डो च्याम्पियनसिप खेलमा छनोट6दिन अगाडि
नवोदित साहित्यीक बाचनालयको नयाँ नेतृत्व चयन 8 दिन अगाडि
ओखरबोटका बेसाहारा बालकको पढ्ने धोको अधुरै (भिडियो सहित) 12 दिन अगाडि
दामोदरकुण्ड जाने बाटोमा भारतीय साधूको मृत्यु 23 दिन अगाडि
बाढीले बगाएको दरखोला लघुजलविद्यूत पुननिर्माण सुरु (फोटो फिचर) 26 दिन अगाडि